Ifulethi le-Studio ku-41 Mowbray Rd - I-Airbnb
Ifulethi le-Studio ku-41 Mowbray Rd
Cambridge, i-United Kingdom
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Helen
U-41 Mowbray Road useningizimu yesikhungo sedolobha iCambridge, eduze kweBell School, Sanger, Babraham, ARM Cambridge kanye neMRC-Addenbrookes Hospital, enezixhumanisi zamabhasi ezinhle enkabeni yedolobha, ujantshi kanye neziteshi ezinkulu zamabhasi.
Ifulethi leStudio linomnyango walo wokungena, igumbi lokugezela le-en suite kanye nekhishi elihlome ngokuphelele elinefriji, ihhavini, ihobhu nomshini wokuwasha. Zonke izitsha zokupheka, izitsha, i-cutlery kanye ne-glassware zihlinzekwa. Kuhlinzekwa zonke izingubo zokulala, amathawula, nokomisa izinwele. Kukhona i-wifi yamahhala, ukufinyelela ocingweni olunezingcingo zamahhala zendawo nezesizwe kanye nokupaka izimoto.
IMowbray Rd isendaweni ehlala abantu eseduze nesiza sesibhedlela i-Addenbrookes, iBell Language School kanye ne-ARM Cambridge, enezixhumanisi zamabhasi ezinhle eziya eHinxton kanye neBabraham Institute.
UHelen uhlala endaweni futhi uyacelwa noma yimiphi imibuzo.